विविध Archives ~ Dakshinkali Online
२२ श्रावण २०७६, बुधबार १२:४२ Dakshinkali Online
सेनामा खुल्यो ६ हजार जनाका लागि जागिर, मेडिकलदेखि ड्राइभरसम्मलाई अवसर श्रावण २२, काठमाण्डौं । फ्ल्यास खबर नेपाली सेनाले विभिन्न पदमा दरखास्त आव्हान गरेको छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ती गर्नु भएकोले नेपाली सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरथी विभाग जंगी अड्डाले ठूलो संख्यामा दरखास्त आव्हान गरेको हो। विभागका अनुसार सैन्य मेडिकल ४० जना, सैन्य सिग्नल २० जना, ड्राइभर […]
१७ श्रावण २०७६, शुक्रबार १३:१७ Dakshinkali Online
तीन तहमा रिक्त ५० स्थानका लागि १४ मंसिरमा उपनिर्वाचन, कहाँ कहाँ छ रिक्त ? श्रावण १७, काठमाडौं । फ्ल्यास खबर तीन तह प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा रिक्त रहेका ५० स्थानका लागि १४ मंसिरमा उपनिर्वाचन हुने भएको छ । विभिन्न कारणले जनप्रतिनिधिविहीन बनेका ५० स्थानमा उपनिर्वाचन गर्न १४ मंसिरका लागि तोक्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई […]
१७ श्रावण २०७६, शुक्रबार ०६:२८ Dakshinkali Online
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश नं– ३ करार सेवा लिने सम्बन्धी सूचना श्रावण १७, काठमाण्डौं । फ्ल्यास खबर स्थानीय तहमा कानूनी सहजकर्ता नियुक्ती सम्बन्धी कार्यविधी, २०७६ बमोजिम प्रदेश नं – ३ का सबै उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाँउपालिकाको लागि एक जना कानूनी सहजकर्ता करार सेवामा लिनु पर्ने भएकाले देहाय वमोजिमको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना […]
फर्पिङबाटै जापानको प्रकृया गरिरहेको वाकाबा एजुकेसन कनसल्टेन्सी
१६ श्रावण २०७६, बिहीबार १४:०८ Dakshinkali Online
फर्पिङबाटै जापानको प्रकृया गरिरहेको वाकाबा एजुकेसन कनसल्टेन्सी श्रावण १६, काठमाण्डौं । फ्ल्यास खबर फर्पिङ नगरको पहिलो शैक्षिक परामर्श केन्द्र(Consultancy) वाकाबा एजुकेसन कनसल्टेन्सी प्रा.लि (Wakaba Ebucation Consultancy) विगत ४ वर्ष देखि दक्षिणकाली नगरपालिका–५ बसपार्कमा संचालित छ । नयाँ बानेश्वरमा मुख्य कार्यालय रहेको यस कनसल्टेन्सीको फर्पिङ शाखा हो । नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट संचालनका लागि यो स्वीकृत […]
कहिले फ्यालाफ्याल कहिले हाहाकार
१४ श्रावण २०७६, मंगलवार ०६:२४ Dakshinkali Online
कहिले फ्यालाफ्याल कहिले हाहाकार श्रावण १४, काठमाण्डौं । फ्ल्यास खबर बर्खाको समयमा लगातार भईरहेको भारि बर्षाका कारण सबै ठाँउहरुमा पानीका मुहानहरु फुटोका छन् । मुहानहरुवाट निस्केको पानी कतै गएर पहिरोजाने त कतै बाटो सडकहरुमा हिलो बनाउने काम मात्र भईरहेको छ । यसको सहि उपयोग गर्न सके हाम्रो गाँउ समाजमा हुने पानीको समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ […]
होटेलमा खाजा खाएर निस्किने बेलामा सोप खाने गर्नुहुन्छ ?
१२ श्रावण २०७६, आईतवार ११:३१ Dakshinkali Online
होटेलमा खाजा खाएर निस्किने बेलामा सोप खाने गर्नुहुन्छ ? श्रवण १२, काठमाण्डौं । फ्ल्यास खबर सोप हरेक घरको भान्सामा पाइने एक प्रकारको मसला हो । कतै होटेलमा खाएर निस्किने बेलामा जसले पनि सोप खाने गरेको पाइन्छ । हामीजसो धेरैले खाना वा खाजा खाइसके पछि सोप चपाउने गर्छौं । सोप न त स्वादिलो हुन्छ, न त […]
अझै पानी पर्ला भन्ने त्रासमा
८ श्रावण २०७६, बुधबार ०५:०७ Dakshinkali Online
अझै पानी पर्ला भन्ने त्रासमा श्रावण ८, काठमाण्डौ । फ्ल्यास खबर फर्पिङ् क्षेत्रमा असहाय बृद्धबृद्धाहरुलाई सहारा दिन बज्र म्याट्रिक्सले २०६५ सालमा बृद्धाश्रमको दर्ता गराएको थियो । विभिन्न सहयोगिदाता, संघ-संस्थाको सहयोगमा बज्र म्याट्रिक्सले सप्ताह कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरि आर्थिक सहयोग जुटाई शेषनारायण मन्दिर संगै रहेको जग्गामा २०६८ सालमा जेष्ठ नागरिक नर्सिङ स्याहार केन्द्र स्थापना भयो । […]
४ श्रावण २०७६, शनिबार १५:३२ Dakshinkali Online
जननेत्र पुस्तकालयको बाचनालय अभियान श्रावण ४, काठमाण्डौ । फ्ल्यास खबर जननेत्र पुस्तकालयले हरेक वडामा एक एक वटा वाचनालय स्थापना गर्ने अभियान सुरु गरेको छ । दक्षिणकाली वडा नं – ६ फूलचेकमा एउटा वाचनालय स्थापना भई सकेको छ भने वडा नं – ३ मा आज वाट अनैपचारिक रुपमा सूरुवात भइसकेको छ । जननेत्र पुस्तकालयका अधयक्ष सैलेस […]